Charger -ka MagSafe Duo lama jaan qaadi karo lacagta degdegga ah ee taxanaha Apple Watch 7 | Wararka IPhone
In badan oo idinka mid ah ayaa hore u yeelan doona curcuraha Apple Watch Taxanaha 7. a qaabka sii wadista cusub, Way dhammaatay wararka xanta ah ee dib -u -qaabaynta dhammaystiran, oo la timaadda shaashad weyn iyo dhowr waxyaabood oo cusub oo ay ka mid yihiin ku dallac degdeg ah. Ma rabtaa inaad u isticmaasho MagSafe Duo si aad lacag uga qaadato? iska ilow inaad haysato lacagtan degdegga ah ee muddada dheer la sugayay, labada duuliye ee Apple waa kuwo aan la jaan qaadi karin si dhaqso leh u dallacaadda Apple Watch Series 7 ...
Runtu waxay tahay in kan MagSafe Duo uu haysto dhibaatooyin ka badan intii la filayay. Fikraddu waxay lama huraan u tahay qof kasta oo haysta iPhone iyo Apple Watch, waa xeedho ku habboon inuu safar u baxo tusaale ahaan, laakiin oo leh iPhone 13 Pro waxaan horeyba u aragnay dhibaatooyinkiisii ​​iswaafajinta sababtuna tahay moduleka kamaradaha cusub iyo naqshada xeedho. Hadda sida aan ka wada hadalnay, waxaan lumin doonaa qarashka degdegga ah ee Apple Watch Series 7 haddii aan rabno inaan ku dallacno MagSafe Duo -kan cusub tan tan kaliya la jaan qaadi kara magnetic-ka cusub ee USB-C ee degdegga ah, suurtagal maaha in la isticmaalo MagSafe Duo si loo isticmaalo mid ka mid ah astaamaha calanka ee Apple smartwatch -ka cusub. Marka loo eego qoraalladii ugu dambeeyay ee taageerada ee Apple Watch Series 7 iyo MagSafe Duo:
Bajajiyaha MagSafe Duo ma taageersan ku dallacsiinta degdegga ah ee Apple Watch Series 7. Si aad si dhaqso ah ugu dallacdo Apple Watch Series 7, isticmaal Apple USB-C Magnetic Fast Charge Cable.
Waxaa cad in waxaa sii kordheysa lagama maarmaan u ah Apple inuu u boodboodo USB-C dhammaan aaladihiisa, taas oo cusboonaysiisa noocyada kala duwan ee ka mid ah kuwaas oo ah MagSafe Duo. Waa ceeb in Aynu luminno mid ka mid ah astaamaha xiddigaha ee taxanaha Apple Watch 7 ka dib markii aan bixinnay ku dhawaad ​​150 euro oo ah qiimaha MagSafe Duo... Adigana, maxaad u malaynaysaa dhammaan dhibaatooyinkaas iswaafajinta ee xiddiglaha Apple ee aaladaha cusub?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Charger -ka MagSafe Duo waa mid aan la jaan qaadi karin sida dhaqsaha leh ee loo soo dallaco Apple Watch Series 7
Fadeexad iyo kaftan waa Magofe Duo.